Amazon Fire HD 10 ukubuyekeza: ukusika emagumbini okungalungile ufakazela iphutha ebizayo - Izindaba Rule
Amazon Fire HD 10 ukubuyekeza: ukusika emagumbini okungalungile ufakazela iphutha ebizayo
The Amazon Fire HD 10 akuyona tablet omuhle futhi akahlali kuze kube nendinganiso ezazingaphambi kwayo kanye neminye hardware Amazon.
Lesi sihloko osesikhundleni “Amazon Fire HD 10 ukubuyekeza: ukusika emagumbini okungalungile ufakazela iphutha ebizayo” kwalotshwa Samuel Gibbs, ngoba theguardian.com ngoLwesihlanu 6 Novemba 2015 07.00 UTC
The Fire HD 10 kuyinto zakamuva tablet Amazon full-sized, kodwa enquma ekude eziningi kakhulu futhi akuyona ezishibhile.
Amaphilisi Fire Amazon ziye hit and miss kuleminyaka emine edlule. Zinikeza a screen ehloniphekile, Ukucaciswa enengqondo futhi ukuhlanganiswa tight zibe semvelo Amazon movie, TV, music, izincwadi futhi zokusebenza ngemali ephansi ukuthi liyehlisa cishe nakho konke okunye. The Fire HD 10 uzama ukuqhubeka ukuthi mkhuba.
The emuva tablet kuyinto plastic ecwebezelayo ukuthi ucosha iminwe and imihuzuko kalula. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
Ukuklanywa of the Fire HD 10 kuyinto utilitarian kakhulu. Inkathi Ehlanganisiwe in a soft, plastic ecwebezelayo ukuthi ngakwazi maka ngemizuzwana okuthola it out of the box, kubukeka eshibhile.
Amazon wenza idili elikhulu mayelana tablet ngokuba okuhlala ukusinda 200 uphendulela in test Tumble yenkampani kuqhathaniswa iPad Air 2'S 30. Ngayeka izikhathi ezimbalwa kuma carpet ngaphandle kokuphula kwalo, kodwa akazange ebekwe ukuzama futhi ukulichitha. It uzizwa kahle behlangene, kodwa umzimba nezimo kulami ngabe kulindeleke.
The izinkinobho kanye namachweba yonke ziklele onqenqemeni phezulu, okusho noma isandla sakho ihlanganisa evolumu kanye headphones port noma inkinobho amandla futhi microUSB port lapho usenza ukubukela ividiyo.
At 7.7mm obukhulu kuba ngokumangalisayo mncane isibhebhe low-ekupheleni. Kukhona bezels kuqhathaniswa compact emhlabeni esibanzi 10.1in, okwenza kube uzizwe ewumngcingo kodwa eside isibhebhe. At 432g akusiyo esinda kakhulu ubambe for a 40 minute TV show, kodwa ngazithola ekufuneni indawo ukuphasa it up lapho bezama uqeda 2.5 ihora movie.
The build nomzimba OK. Isibuko iyona let enkulu phansi konke. It 10.1in isinqumo 720p futhi ongaphakeme pixel kwabantu 149 Amaphikseli inch per. Ukuze uqhathanise amaphilisi amaningi okungenani 200ppi. Previous ende Fire HD Amazon, the HD 8.9, kwadingeka a screen 1080p kanye 254ppi.
The screen akuyona ebukhali, okwenza umbhalo, icons and izithombe bheka esingaphansi crisp. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
Akunandaba kakhulu isiqophi, olubheka passable, ngemibala avareji futhi engele okuhle wokubuka, kodwa umbhalo, icons, izithombe kanye nezinye izinto static bheka luhluke Pixelated.
Kusobala ikakhulukazi uma uzama ukufunda incwadi kuso, okuyinto ifana okuthile eminyakeni emihlanu edlule. Nakuba Bookerly Ukuthayipha okuhle kuka Amazon kusiza - sizibulale ukuba Helvetica ugcizelela inkinga - Ngakuthola kunzima ukufunda isikhathi eside njengoba umbhalo nje crisp ngokwanele usayizi encane Ngingathanda evamile ukufunda.
The izikhulumi stereo ohlangothini tablet babebahle ngendlela emangalisayo okuhle futhi elikhulu for tablet izikhulumi. Noma kunjalo hhayi okuhle ngokwanele ukusebenzisa njengoba ozinikele umculo player, kodwa esihle ukubukela ividiyo ngenkathi ukupheka.
Amagama: MediaTek isikwele-core (1.5GHz ezimbili-core + 1.2GHz ezimbili-core)
RAM: 1GB RAM of
Isitoreji: 16 noma 32GB; microSD slot iyatholakala
Isistimu esebenzayo: Fire OS 5 okusekelwe Android 5 Lollipop
Ikhamera: 5ILUNGU LEPHALAMENDE ikhamera, 0.3MP ebheke phambili ikhamera
Ukuxhumana: Wi-Fi, Bluetooth
Ubukhulu: 159 x 262 x 7.7mm
hardware Weak kuholela isipiliyoni abampofu
A slot microSD ikhadi ingenye yezindawo ezimbalwa plus amaphuzu for Fire HD 10, ukuvumela ukuba wengeze isitoreji kalula. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
The Fire HD 10.1 has a isikwele-core MediaTek wokugaya 1GB of RAM, engesiyo kuze kube umsebenzi powering ithebhulethi. Ezinye izinto wagijima emihle, kodwa empeleni sethula kubo noma ushintshe phakathi imisebenzi ehlukene kwaba dogged ngumuntu lag eside ngokwanele ukuba ube uzibuze ukuthi ithebhulethi lase yaphahlazeka.
Lapho tablet kuqala up usebenza emihle. Ilayisha ividiyo yokuqala kusukela Amazon Prime Isiqophi Instant futhi usebenza emihle. Kodwa kungcono uma uqala ukulayisha yesibili, noma ukushintshela kolunye uhlelo lokusebenza ukuthi izinto uqale ukuba creak.
Isiqophi ukudlala kungase ngezinye izikhathi kube bushelelezi, kodwa wayevame miss ozimele kanye judder. Ukuswayipha yonkana homescreen wayengasiqonda futhi alinganiselwe kabi, ngenkathi ufaka izinhlelo zokusebenza baletha tablet liphenduka unyawo lonwabu.
Imidlalo Imidwebo olunzulu ezifana Racing Real 3 ayefana unplayable, kanti ngisho Isikhumbuzo Valley namalimi ngezikhathi.
Ibhethri lwathatha emhlabeni amahora ayisikhombisa isiqophi sokudlala. Udaba enkulu ukuphila kwebhetri wukuthi screen ayinayo inzwa futhi akusho Ukuhlela ukugqama ngokuzenzakalelayo, okusho ukuthi ngokuvamile bright kakhulu noma buthuntu kakhulu.
Ukushaja wathatha phakade. Kwathatha amahora amahlanu ukushaja ngokugcwele Fire HD 10. Amaphilisi Iningi ukushaja ngamahora amabili kuya kwamathathu.
Wi-Fi reception wayebuye abampofu. In the izindawo efanayo 6P Nexus Google noma iPad Air 2 athathe a signal eqinile Wi-Fi, emhlabeni 12m kusukela router, the Fire HD 10 ngabe uzabalaze. Download ngesivinini zokusebenza kanye video babe futhi kancane. Uxhumano lwe-inthanethi kwi-router wayengeyena isici nokukhawulela.
Fire OS 5 yisinyathelo phezu odlule zokusebenza Amazon. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
The Fire HD 10 iza version yakamuva Fire OS Amazon 5, ogxile Android ngonyaka odlule 5 Lollipop. A ajwayelekile lokusebenza grid iyatholakala kwi sasekhaya, kodwa ukuswayipha kwesokunxele kanye nelungelo nixazulule imikhakha.
Ukuswayipha ngaphesheya izincwadi, ngokwesibonelo, ubonisa izincwadi zakho uthenge phezulu, izincomo izincwadi mahhala uma unanoma Amazon Prime noma Kindle Unlimited bese nezincomo eminye okusekelwe umlando wakho wokuthenga. Kungokufanayo uya isiqophi, imidlalo, Izinhlelo zokusebenza, music, audiobooks, newsstand nezitolo Amazon.
I kwesokunxele-kunazo screen kukhombisa izinto muva esetshenziswa noma sabukela, okuyinto indlela esheshayo yokuthola libuyiselwa okuqukethwe.
Isebenza kuhle, futhi kwenza the best of a tablet ukusetshenziswa-based. Kuba isofthiwe lokuqala tablet ngiqaphelile ukuthi Uye kakhulu ngaphesheya standard lokusebenza grid futhi iyona into engcono mayelana Fire HD 10.
Lonke isofthiwe akamuhle. Swayiphela phansi kusukela phezulu kuya ukubona izaziso futhi yini ifana iqoqo toggles esheshayo Wi-Fi, Bluetooth, screen ngokushintshana, musa ukuphazamisa kanye nabanye. Kodwa eqinisweni iningi kukhona nje izinqamuleli izilungiselelo izikrini, hhayi toggles, okuyinto iyadumaza.
Omunye akhawunti Amazon kumele ibhaliswe ku-tablet, kodwa amaphrofayli umsebenzisi multiple kuhlanganise amaphrofayli yezingane kungaba isethaphu, okuyinto enhle isibhebhe umndeni.
Fire OS ukusebenzisa izinhlelo eziningi ze-Android, kodwa likwazi ukufinyelela Amazon lokusebenza esitolo kuphela. It has a ukhetho olukhulayo lezinhlelo zokusebenza, kumbandakanya inkokhelo-for zokusebenza kutholakala mahhala ngaphansi Prime "underground" kukhushulwa esikhundleni Amazon, kodwa akuyona olunzulu njengoba Google Play futhi akanawo zonke nemidlalo yakamumva.
Ezinhlanu megapixel ikhamera ezibheke phambili VGA selfie ikhamera bampofu. Athatha dim, buthuntu, izithombe ezilufifi entula ngokuningiliziwe.
The Lockscreen ubonisa Izikhangisi ngaphandle ukhokha i extra £ 10 ukususa 'Izipesheli'. Photograph: Samuel Gibbs for the Guardian
The 16GB Amazon Fire HD 10 kanye izikhangisi on the screen ilokhi kubiza £ 170 black noma white. The 32GB okufushane kubiza £ 200, ngenkathi kususwa imikhangiso izindleko £ 10.
9.7in Samsung sifana Galaxy Tab A kubiza £ 179, kanti kunathi 8in Galaxy Tab S2 kubiza £ 240 kusukela Amazon kanye 32GB isitoreji. Apple iPad eshibhe kubiza £ 219. Hudl Tesco sika 2 kubiza £ 99, futhi abaningana amaphilisi ngonyaka odlule ephezulu ayatholakala emhlabeni £ 200.
The new Fire OS 5 ine amacebiso amahle futhi kuyisinyathelo up kusukela izinguqulo ezandulele uhlelo lokusebenza. Amazon die-hards azokuthanda kuhlanganiswa movie yenkampani, TV, izincwadi kanye nezinye izinsizakalo.
Kodwa screen 10in nje akuyona ephezulu isinqumo ngokwanele ukuba basisebenzise amasevisi Amazon, wokugaya akuyona inemandla ukugijima imidlalo imidwebo olunzulu futhi lags ngisho imisebenzi elula.
Inkinga enkulu nge Fire HD 10 ukuthi akusiyo eshibhile. Uma kwakunjalo £ 100, iningi ngamaphutha babengase zithethelelwe, kodwa ngesikhathi £ 170 zikhona inala amaphilisi ukuncintisana ezinikeza nakho kangcono.
Buhle: omkhulu Amazon ukuhlanganiswa, wasinda amaconsi ambalwa ngaphandle kokuphula, slot microSD ikhadi
Bawo: ongaphakeme isinqumo screen, processor slow, ukusebenza laggy, ezibuthakathaka Wi-Fi, azizizeli ukukhanya ukulungiswa, amakhamera abampofu, ukushaja kancane
Tesco Hudl 2 ukubuyekeza: a lot of tablet for imali
Amazon Fire HD Kids Edition tablet ukubuyekeza
Amazon.com, Android, Isigaba, Gadgets, Kindle Fire, Izibuyekezo, Samuel Gibbs, amakhompyutha Tablet, Technology
← Indlela ikoloni Mars Five Mars ezitholwe aguqula ukuqonda kwethu le planethi ebomvu →